स्रोत नखुलेको ८ लाख रकम सहित ५ जना पक्राउ – Ankush Daily
स्रोत नखुलेको ८ लाख रकम सहित ५ जना पक्राउ
On १७ असार २०७७, बुधबार २२:४५
वीरगंज, १७ असार ।
श्रोत नखुलेको नेपाली रुपैयासहित एक जनालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट भिखमपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जगरनापुर गाउँपालिकाको वडा नं. २ दसौताबाट स्रोत नखुलेको रु २ लाखसहित एक युवकलाई पक्राउ परेका हो ।
भारतबाट ना २ प ९४३१ नम्बरको मोटरसाइकमा नेपालतर्फ आउँदै गरेको धोबिनी गाउँपालिका वडा नं. १ पिपरा बस्ने बर्ष २० को जय प्रकाश पटेललाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट भिखमपुरका प्रहरी निरिक्षक किशमान तमा·ले बताए । प्रहरीले पक्राउ परेको जयप्रकाशको साथबाट ५० को नोटको ४ हजार थान रकम बरामद गरेको हो ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा बाट खटिएको प्रहरी टोलीले वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. २४ रामगढवामा चेकजाँचको क्रममा स्रोत खुलाउन नसकेको ६ लाख रकम सहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार रक्सौल थाना पंटोका वडा नं.१७ बस्ने रामचन्द्र प्रसाद कलवारको छोरा बर्ष ३६ को प्रमोद कुमार कलवार र जिल्ला पर्सा बी.म.न.पा.वडा नं.२५ सिर्सिया बस्ने रघुनाथ साह कलवारको छोरा बर्ष २९ को सत्रुधन प्रसाद गुप्ता रहेका छन् ।
उनीहरु भारतबाट नेपाल तर्फ ना.५१.प.२८०१ नम्बरको मोटरसाईकल चढी आउंदै गर्दा शंका लागी चेकजाँच गर्दा सो रकम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको थियो ।
पक्राउ परेको रकम मोटरसाईकल र दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा जिल्ला बारा महागढीमाई न.पा.वडा नं.३ हाल बी.म.न.पा.वडा नं.६ बस्ने नथुनी प्रसाद सोनारको छोरा बर्ष ३७ को अशोक कुमार साह र जिल्ला पर्सा बी.म.न.पा.वडा नं.१५ भिष्वा बस्ने रामअश्रेय साहको छोरा बर्ष ५० को भिखारी साह सोनार समेत संलग्न रहेकोले निजहरु समेतलाई नियन्त्रणमा लिई अवैध वितिय कारोवार शिर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान कार्य भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।